Kooxda Juventus oo markii 3-aad xagaaga dalbanaysa Hector Bellerin – Gool FM
(Torino) 02 Maarso 2018 – Juventus ayaa markale soo noolaysay xiisihii ay u qabtey dadabka midig ee kooxda Arsenal ee Hector Bellerin oo ay xagaaga ku tala jiraan.
Bellerin ayaa horay Juve loola xiriirinayay bisha Juunyo ee dhamaanba labadii suuq xagaa ee ugu dambeeyay, haatanna The Guardian ayaa qoraya in Bianconeri ay markii 3-aad weerari doonto kooxda Arsenal.
Yeelkeede, wargayska ayaa ka digaya inuu Gunners kaliya qancin karo dalab ku kacaya €50m, iyadoo uu warsiduhu intaa raacinayo in uu laacibkan Spanish-ka ihi uu aayihiisa ka fikirayo kaddib sanad kale oo niyad jab ah.
22-jirkan ayaa waxaa sidoo kale dalkiisa uga gacan haadinaysa kooxda Barcelona, oo ah isla halkii ay kasoo bilaabmeen waayihiisa ciyaareed.
AC Milan oo hal mar soo qaadanaysa laba laacib